Impilo yamanga yabantu abadala, amaqiniso aphazamisa imizwelo | Izincwadi Zamanje
NgoSepthemba 2020 umbhali wase-Italy u-Elena Ferrante washicilela inoveli yakhe Impilo yamanga yabantu abadala, iba impumelelo yomhleli engenakuphikwa. Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi akazi ukuthi umbhali ungubani - linikezwe igama lakhe - inoveli ibonakala ikhanga kakhulu emphakathini. Ngalo mqondo, kuyindaba yokutholwa okwenziwa yintombazane ngemikhuba efihliwe yabantu abadala.
Ngaphansi kwale mpikiswano, sifakaza indaba yokungqubuzana okungahle kube khona okuvela ebusheni ngenxa yokuvezwa kwamaqiniso aphazamisa imizwelo. Ngakho-ke, umbalisi, uGiovanna, ulandisa ngamava akhe kumuntu wokuqala futhi aqinisekise, ngaphandle kokukhohlisa, umfundi ngezenzakalo. Ngasikhathi sinye, uhlobo lobumbano nobumbano lwenziwa lubhekiswe kumuntu oyinhloko.
1 Mayelana nomlobi, u-Elena Ferrante
1.1 U-Elena Ferrante, umkhiqizo wezincwadi zakhe
1.2 Izincwadi ezicishe zibe ngamashumi amathathu
2 Amazwibela we-The Lying Life of Adults
2.2 Izimfihlo zomndeni
2.3 Izincwadi njengendlela yokuphendula
3 Ukuhlaziywa okufushane kwencwadi ethi The Lying Life of Adults
3.1 Ingqikithi yencwadi
3.1.1 Ukufunwa kwethemba nolwazi
3.2 Isitayela esinqoba abafundi
Isichasiso esiyimfihlakalo salo mbhali siyinto engenakugwemeka selokhu kwashicilelwa incwadi yakhe yokuqala cishe eminyakeni engamashumi amathathu edlule. Yebo, Kuze kube manje, ubunikazi bombhali abuqinisekile, ngaphandle kwengxoxo nge-imeyili. Kuyaziwa kuphela ukuthi - kuthiwa - wazalwa ngo-1943 eNaples, e-Italy nokuthi u-Elena Ferrante ungumbumbumbulu.
Ngalezi zizathu, kunesimo kuphela ngombhali. Ngaphezu kwalokho, abanye babafundi bakhe bakholelwa ukuthi amanoveli akhe ayizithombe zokuphila kwakhe. Ngokunjalo, ukushicilelwa okusha ngakunye kuhambisane nemibono nocwaningo ukuthola ukuthi ungubani ngempela u-Elena Ferrante. Ngakho-ke, imininingwane evamile yomlando womlobi imakwe yimibhalo yakhe.
U-Elena Ferrante, umkhiqizo wezincwadi zakhe
Leli cala akulona elokuqala lombhali wase-Italy onquma ukuhlala angaziwa. Kepha, into engangabazeki ukuthi, njengoba kuchazwa ingosi ye-Amazon, lona wesifazane "uyindida enkulu ezincwadini zamanje." Khona lapho, kuthiwa "ihlaba umxhwele abafundi abayizi-20.000.000 46 XNUMX emazweni angama-XNUMX" emhlabeni jikelele. Ngaphezu kwalokho, Impilo yamanga yabantu abadala ingenye yezincwadi eziyi-100 ezikhethwe umagazini Isikhathi.
Ngenxa yalokho, ungumbhali wangempela njengoba nezincwadi zakhe zikhona. Okungukuthi, U-Elena Ferrante (noma ngabe ungubani ngempela) ungumbhali ngoba amanoveli akhe (ngaphezu kwakho konke) amnika impilo yomphakathi. Ngemuva kwalokho, kungashiwo ukuthi amanoveli akhe akha isethi yemibhalo eyiqiniso ekhomba ngomdali wemibhalo.
Izincwadi ezicishe zibe ngamashumi amathathu
Kuyaziwa ukuthi u-Elena Ferrante waduma kulo lonke elaseYurophu ngo-2011 lapho eqala ukushicilela ngemuva kwezincwadi ezine. Kokugcina, okwaziwa ngokuthi Abangani ababili, inoveli yesine yaphuma ngo-2015 (ngeSpanish) ngokwamukelwa okukhulu okuthandwayo. Manje eyakho Ukushicilelwa kokuqala kwaba ngesiNtaliyane ngo-1992, Uthando olucasulayo, ukushicilela kabusha ngo-2002 Izinsuku zokushiywa.
Kamuva, washicilela Indodakazi emnyama (2006), inoveli enomlando onamandla wokulandisa nabalingisi, lapho kukhombisa khona izimpawu zokuziphendukela kwemibhalo okuphawulekayo. Ngemuva, njengoba kushiwo ngaphambili, ushicilele i-tetralogy yakhe yokuhlukanisa phakathi kuka-2011 no-2015. Ekugcineni, ngokwethulwa kwe- Impilo yamanga yabantu abadala (2020), u-Elena Ferrante wazisungulela into enhle yokubhala.
Amazwibela we Impilo yamanga yabantu abadala
Kule noveli ka-Elena Ferrante, Ngesikhathi eseyingane, uGiovanna uthola ukushona kwamanga engxenyeni yakhe yothando, eyabazali bakhe. Lokhu kwenzeka lapho ezwa ubaba wakhe echaza (ngaphandle kokwazi kwakhe) ebubini bendodakazi yakhe. Ngale ndlela, intombazane kufanele ibhekane neqiniso elisha, lapho iqonda khona ukuthi abantu abadala baqamba amanga kanjani, ngisho nakulabo abasondelene kakhulu nabo.
Nakanjani, intombazanyana iyathinteka ngamanga nokuziphatha komndeni wayo (ilungu le-Neapolitan bourgeoisie ngawo-1990). Ngakho-ke, uGiovanna, ukhumbula ukuthi ubaba wakhe wathi "mubi njengobabekazi wakhe uVittoria", umuntu ayengenalwazi ngaye.
Ngenxa yalokho, uqala ukufuna lo anti futhi asole umndeni wakhe aze ahlangane noVittoria, osezingeni eliphansi kwezomnotho. Kancane kancane uGiovanna uyaqonda ukuthi ubabekazi wakhe ungowesifazane othintekayo onempilo enesiphithiphithi, wehluke kakhulu empilweni yansuku zonke yabazali bakhe, izifundiswa nonxiwankulu.
Izincwadi njengendlela yokuphendula
Ngenxa yezimo ezichazwe ezigabeni ezedlule, uGiovanna (umfundi ojwayelekile) uzicwilisa kakhulu ezincwadini. Ngaphezu kwalokho, osemusha ukufundisa ngokubaluleka kokufunda kanye nemfundo ngokujwayelekile. Kulesi simo, kuvela uRoberto, uthisha omgqugquzela ukuthi afune njalo ukufunda okusha nokubeka okulindelwe okuphezulu ngaye.
Ngale ndlela, ukulandisa kuyaqhubeka - kuhlanganisa isikhathi esiyiminyaka ecishe ibe yimine - kanye nezinye izindaba ezincane ezihambisana nendaba emaphakathi. Kakade ngasekupheleni Impilo yamanga yabantu abadala, ukuqiniseka kwentombazane kuba "ukungabaza okudingekayo." Okwamanje, akukho okushiwoyo futhi into ebaluleke kakhulu ukuthola ulwazi olusha ngaphandle kwemikhawulo noma ukucwaninga.
Ukuhlaziywa okuncane kwencwadi Impilo yamanga yabantu abadala
Kule noveli yakamuva ka-Elena Ferrante kunezindikimba eziningana ezihlangene ekwakhiweni kwemicimbi. Phakathi kwalezo zihloko, iningi ligxile othandweni nasemangeni. Kunjalo, uthando luyindikimba yendawo yonke, kepha umbhali uyifinyelela ngomuntu osemusha othola uhlangothi lwakhe oluhle nolubi.
Ukufunwa kwethemba nolwazi
Impilo yamanga yabantu abadala ilandisa ukuwohloka kwesimo sobuhle bobuntwana eGiovanna, umlingiswa oyinhloko, ngenxa yamanga alimazayo. Kodwa-ke, le ntombazane ngaphambi kokutholwa kwenkohliso eseduze, ibona indlela yokuphuma iye ekufuneni iqiniso ... ithemba liba yinkinga enqumayo.
Nakanjani, i-protagonist ihlangabezana nezingxabano ezibalulekile, ezibalulekile ekukhuleni ngokomzwelo kwentombazane esiteji esibucayi kakhulu. I-psyche yowesifazane uGiovanna incike kakhulu kulokho kuzitholela kanye naleyomizwa. Ngubani futhi ofinyelela izambulo ezithile ngokubaluleka kokubukeka kwabantu.
Isitayela esinqoba abafundi
Impumelelo Impilo yamanga yabantu abadala Akuyona imfihlakalo yokuthi ungubani umbhali. Ngamanye amagama, akulungile ukungaziboni ukufaneleka kwemibhalo ka-Elena Ferrante. Ngakho-ke, kubalulekile ukukwenza kucace lokho kuyisitayela sokungena sendaba yomuntu wokuqala okubandakanya abafundi.
Ngenxa yalokho, Ukulandisa okushiwo yizwi eliphikisayo kuveza umphumela wokusondelana, okuthumela ubufakazi bentombazane ngobuqiniso. Eqinisweni, lapho nje indaba iqala, abafundi bavame ukuzizwa behlonishwa kuyo futhi bafuna ukuhamba nayo ekuyifuneni kuze kube sekupheleni.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Impilo yamanga yabantu abadala